Banyere Anyị - Guangzhou Aiweidy Lighting Acoustics Co., Ltd
G uangzhou Aiweidy Lighting Acoustics Equipment Co., Ltd, Anyị bụ otu nke ọkachamara n'ichepụta na-ere ụlọ ọrụ nke ogbo ọkụ. Anyị Company e guzobere ya na 1992, ma ugbu a, nwere 18 afọ 'ahụmahụ.
Company nwere abụghị naanị elu mmepụta akụrụngwa, ma a ọnụ ọgụgụ nke elu-edu, elu technology, ọkachamara injinia na ukpụhọde nke ọkachamara na oru pesonel, a ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ịdị uchu, ịdị n'otu ndị magburu onwe mkpara. Company aha di na akara, nkà na ụzụ na otutu iche iche, na mgbe niile ike elu àgwà ngwaahịa na melite isi competitiveness nke ụlọ ọrụ. Na 2003 ụlọ ọrụ gafere 09001: 2000 mba quality asambodo, na-enwetara "OA", "CCC" asambodo.
Aiweidys 'aha na mbụ, àgwà mbụ, ọhụrụ mbụ, ọrụ mbụ "obibia, na mmụọ nke ndị mmadụ -oriented, nkà na ụzụ ọhụrụ na-adigide mmepe" azụmahịa nkà ihe ọmụma, dị ka mgbe niile, na-enye ndị ahịa anyị na ndị kasị mma na ndị kasị oru oma ngwaahịa na ọrụ nke ndị mba ọzọ ahịa laghachi anyị nkwado na ịhụnanya.
G uangzhong Aiweidy Lighting Acoustics Equipment Co, Ltd, bụ a nnyocha na mmepe, mmepụta, ahịa na ọrụ ndị ọkachamara ọkụ na ụda na arena nke elu-tech ụlọ ọrụ Company emi odude ke Baiyun District nke Guangzhou City, ekpuchi 15 acra, ewu ebe nke 25000 m ^ 2. Garden osisi, ornamental iyi n'ime ọdọ mmiri. 700 m ^ 2 factory na ọgụgụ isi multi-ọtọ studio, karịa 1.000 square mita nke oge a na ọfịs. Mgbe afọ 20 nke mmepe, ụlọ ọrụ na-a nnọọ nnukwu ọnụ ọgụgụ ụlọ ọrụ Product obodo gburugburu mba exported na n'ụwa nile, na anụ ụlọ na ndị mba ọzọ ndị ahịa n'otu.
Guangzhou Aiweidy Lighting Acoustics Equipment Co., Ltd, Anyị bụ otu nke ọkachamara n'ichepụta na-ere ụlọ ọrụ nke ogbo ọkụ. Anyị Company e guzobere ya na 1992, ma ugbu a, nwere 18 afọ 'ahụmahụ. Anyị nakweere a na kọmputa na netwọk management usoro, na àgwà management usoro na ike dị ISO9001: 2000 chọrọ maka mmepụta. Anyị na ngwaahịa na e certificated na "CCC" na "OA" na "RoHS".
Aiweidy ngwaahịa na-enwe aha ọma mba na mba ahịa, karịsịa maka anyị na-akpali akpali isi ọkụ, Ikanam ọkụ na n'èzí ọkụ. Ugbu a, anyị na-na-exported na Europe, Southeast Asia, na Middle East, North na South America na ndị ọzọ na mba na mpaghara. N'ileghachi anya n'ihu, ihe niile ndị ọrụ ibe nke Aiweidy ga akwado echiche nke àgwà mbụ, ọrụ mbụ, ọhụrụ mbụ na ịtụkwasị obi mbụ dị ka mgbe niile na-eje ozi ahịa na enyi si n'ụlọ na mba ọzọ.